Ukudityaniswa kweMibala eyomeleleyo kule Ntwasahlobo | IBezzia
Ukudityaniswa kombala weBold kule ntwasahlobo
UMaria vazquez | 26/04/2021 18:00 | Ndinxiba ntoni
Baninzi kuthi abafumana imibala engathathi hlangothi iqabane elihle ekwenzeni iimpahla zethu zemihla ngemihla. Oku kusivumela ukuba senze indibaniselwano ngokulula ngokudlala ngempahla eyahlukileyo phantse ngaphandle kokucinga. Nangona kunjalo, kukho abo bahlala bekho ukulungele ukubeka umngcipheko.
U-Emili Sindlev, uLeonie Hanne, u-Elena Giada kunye no-Blaire Eadie aboyiki nje umbala kodwa bawenze waba luphawu lwabo. Ukujonga iiakhawunti zabo ze-Instagram sinokuphefumlelwa ukuba sizenze Umdibaniso we-sexy kule ntwasahlobo.
Kwenzeka into efanayo ngombala njengaleya yengubo singayiqhelanga ukuyisebenzisa kwaye ngenye imini sagqiba ekubeni siyithenge. Amaxesha okuqala ambalwa siya kuzifumanisa simangalisa kakhulu xa sisebenzisa; emva koko siye kuye. Ukufundisa iliso kuphela kwento ekufuneka siyenzile. Iqala ngokudibanisa Umahluko kwiiplagi kwaye uye phambili ukusuka apho ukuba awuqinisekanga.
Kodwa masifike kwinqanaba, kwezi ndibaniselwano ezisimemayo emngciphekweni wombala kule ntwasahlobo. Enye yeentando zethu yile ifom fuchsia kunye nohlaza. Unokukhetha phakathi kwee-shades ezahlukileyo eziluhlaza, nangona singenako ukunceda kodwa sibonise ukuthanda kwethu imifuno etyheli.
Iorenji neblue yenza isicelo sethu sesibini. Yindibaniselwano enesibindi kakhulu ukuba, njengoEmili, ubheje ngokudibanisa iimpahla kwiithoni ezinamandla kakhulu, nangona kunjalo, kulula ukuzithambisa. Njani? Ukukhetha iimpahla eziluhlaza okwesibhakabhaka kwiithoni ze-pastel ezinje ngeGiada.
Unokudibanisa iorenji kunye nelilac. U-Lilac udlale indima enkulu kwingqokelela yehlobo-lasehlotyeni kwaye uya kuqhubeka esenza njalo. Umbala osebenza kakuhle kunye neetoni ezishushu nezibandayo. Ungayidibanisa kunye nomthubi kunye nefuchsia ukwenza indibaniselwano yemibala enobungangamsha kule ntwasahlobo.
Imifanekiso - @yelenk, @Elenagiada, @kwibra, @iamfanlalisa, @iamfanlalisa, @nguozakike_tz, @iqosweb
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » fashion » Ndinxiba ntoni » Ukudityaniswa kombala weBold kule ntwasahlobo
Ungayihombisa njani ngesimbo se-boho seediliya
Ukutya kweKetogenic, yonke into ekufuneka uyazi ngokutya kweKeto